CHAMPIONS: AC Milan oo loo caleemo saaray ku guuleysiga koobka horyaalka Serie A – Gool FM
(Milan) 22 Maajo 2022. AC Milan ayaa loo caleemo saaray ku guuleysiga koobka horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, kaddib markii ay ku garaaceen kooxda Sassuolo 0-3, kulankooda ugu dambeeyay horyaalka Talyaaniga.
Qeybta hore ee ciyaarta ataa lagu kala nastay 0-3 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee AC Milan.
Daqiiqadii 17-aad AC Milan ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Olivier Giroud, waxaana ka caawiyay saaxiibkiis Rafael Leão.
32 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Milan ayaa dhalisay goolkeeda labaad kaddib markii uu 0-2 ka dhigay ciyaarta Olivier Giroud oo markale ay caawin kaga timid Rafael Leão.
Daqiiqadii 36-aad Milan ayaa dheereysatay hoggaaminta dheesha kaddib markii uu 0-3 ka dhigay xiddigooda khadka dhexe ee Franck Kessié, waxaana caawintiisa saddexaad ee kulanka sameeyay Rafael Leão.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-3 ay kaga soo adkaatay AC Milan kooxda Sassuolo oo ay booqatay, Rossoneri ayaa muddo 11 sano kaddibloo caleemo saaray hanashada koobka horyaalka Talyaaniga, iyada oo ku qaaday 86 dhibcood.